ဖြိုး အလ်ဝိုင်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၅)
အောက်ကစာကတော့ သူငယ်ချင်း phyu ကနေ ကျနော် C box ကနေ လာရောက်ပြီး ပီတာကျော်ကို စိတ်မဆိုးဖို့နဲ့ ဘလော့အားမနှောင့်ယှက်ဖို့ တောင်းပန်ထားတာပါ.. ဒီလိုပြောလို့ ကျနော့ ကို ကျနော် ဂုဏ်ယူထုတ်ဖော်ချင်လို့ မဟုတ်ပါ။သူ၏စာအား ကျုပ်လေးစားပါတယ်။ သူလိုသာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အယောက်ဆီတိုင်းဟာ သူတပါးဘာသာကို စော်ကားပြီး မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေနဲ့ လွှင့်နေတဲ့ ငနာဘုန်းကြီးတွေ့ရဲ့ မကောင်းကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြီး ဘာသာထဲကနေ ထုတ်ပယ်မယ်ဆို တကယ်ကို အားရစရာပဲဗျာ.. အခုတော့ သူတပါးဘာသာကို စော်ကားပြီး မဟုတ်မမှန်သတင်းလွှင့်နေတဲ့ ငနာဘုန်းကြီးများက ကျောင်းထိုင်ဖြစ်လိုဖြစ် ဘာဘွဲ့တွေလဲ မသိဘူး ရလိုက်တာ တသီတသန်းကြီး ကုလားစာ(ပါဠိ စကား)၇ွတ်နိူင်လိုတဲ့ ဘွဲ့တွေရနေကြတယ်..... ခရစ်ယာန်များကလည်း အစာကြေတာမဟုတ်ဘူး ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုရားကိုပဲ ချိုးနှိမ်နှိမ် သူတောင်းစားဘုန်းကြီးဆီမှာ တပည်ခံတယ်လို့ သွားစွပ်စွဲ စာအုပ်တွေ ထုတ်ဝေတယ်......
ဟိုက ပထမတော့ တင်း(ဒေါသထွက်)တာပေါ့ဗျာ...... သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ခရစ်တော်မပြောနဲ့ သူတို့တမန်တော်များရဲ့ လုပ်နိူ်င်စွမ်း အစွမ်းရည်လောက်များတောင် မရှိတဲ့ ဂေါတာမကို စကားထဲ ထည့်ပြောလို့ ဆိုပြီး ပေါက်ကွဲကြတယ်ဗျာ...... ဒါနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ့ကတော့ သမိုင်းအထောက်အထားနဲ့ ပြန်လှန်ရှင်းလင်းပြသတဲ့အခါ ငနာဘုန်းကြီးများ ပါးစပ်တော့ ပိတ်သွားတယ်...... ဒါကို ခရစ်ယာန်များ ငြိမ်နေတာကို ကျုပ်သဘောမကျပါ...... နောက်နောင် ဒီလိုမျိုး စွပ်စွဲပါက ဖမ်းဆီး ထောင်ချအရေးယူမိဟု ဥပဒေ ထုတ်သင့်ပါတယ်...... အခုလည်း ကျုပ် ထက်ကြားနေတုန်း ကျုပ်တို့ ဒါကြောင့် ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးလိုက်မှသာလျှင် နာအေး ပါအေး ရှိတော့မယ် နိူမို့ဆို နေရင်ထိုင်ရင် မိစ္ဆာလေးများရဲ့ ပူဇော်ပသမူကို စားပြီး အဆီဝကား သူတပါးဘာသာကို ကျောင်းမှာထိုင်ပြီး တောင်စဉ်းစား မြောက်စဉ်းစား စောက်ကားဖို့ပဲ ချောင်းနေတဲ့ သူတောင်းစားဘုန်းကြီးများကို ထောင်ချအရေးယူမူက အကောင်းဆုံးပဲလို့ ပြောပါရစေဗျာ.. တဘာသာနဲ့ တဘာသာအပြန်အလှန်လေးစားရိုသေတတ်မယ်ဆို ကောင်းပါတယ်ဗျာ..... သူငယ်ချင်း phyu ကို ကျေးဇူးတင်တာပါ.....
ဒီနေရာမှာ ဘာပြောချင်လဲဆိုတာ ကျုပ်သိပ်တော့ သဘောမပေါက်ဘူး ဒါပေမဲ့ နားလည်ဖြည့်စွက်ပေးပါတယ်.
if u want to discuss plz invite ur blog and discuss dont make kopeter blog plzzzz
5 Jan 10, 08:07 AM
phyu: kotaw chaw ...plz just read and dont angry kopeterand dont distrub kopeter blog plz
5 Jan 10, 08:05 AM
ဒါပေမဲ့ ကြိုပြောပါရစေဗျာ ကျုပ်အား လာတောင်းပန်ရင် အချည်းနှီးလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ပီတာကျော်က သူဘလော့ဂ်ပေါ်ကနေ တောင်းပန်ရမယ် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကို တောင်းပန်ရမယ်...... မွတ်စလင်မ်ဘာသာဝင်များကို တောင်းပန်ရမယ်...... ဒါဆိုရင် ကျုပ်ဘလော့ဂ်အား ဖျက်ဆီးမယ်လို့ ကျုပ်ပြောခဲ့သောလည်း ပီတာကျော်သည် ယခုထိ မတောင်းပန်ပါ..... ယခုကျုပ် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြည့်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ခရစ်ယာန်ကို စော်ကားထားတဲ့ ဘလော့ဂ် မွတ်စလင်ကို စော်ကားထားတဲ့ ဘလော့ဂ် တွေကို ထက်ထက်ပြီးတွေ့နေရတယ်။ ဒါကြတော့ ပြည်ပရောက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပါလို့ အော်အော်နေတဲ့ ငနာငတုံးဘုန်းကြီးနဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါ မိစ္ဆာလေးများကလည်း ဟန့်တားခြင်း မ၇ှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အားပေးအားမြှောက် မသိချင်ဟန်ဆောင် နှာစေးနေတာကိုလည်း တွေ့ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပီတာကျော်က ခရစ်ယာန်၊ မွတ်ဆလင်မ်များကို တောင်းပန်ရုံနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး ဒီမိုကရေစီပါလို့ အော်နေတဲ့ ငနာဘုန်းကြီးများကလည်း တောင်းပန်ရမယ် (သူတို့ပြောနေကြ ဖာသည်ပါးစပ်လို့ပေါ့) ငါတို့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး ဒါဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ လှည့်ကွက်တွေပါ ဆိုကြတယ်......
သူတို့သာ ဒီမိုကရေစီ တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ငါတို့ကပဲ သူတို့အစား ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကို တောင်းပန်ပါတယ် မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များကို တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုရင် ကျုပ်ဒီဘလော့ဂ်အားလုံးဝ ဖျတ်ဆီးပါမယ်... သူတို့ အနောက်နိူင်ငံမှာ သူတောင်းစားလို နိုင်ငံခိုလှုံခွင့်တောင်းတုန်းက ဘယ်လိုတောင်းလဲ ငါတို့ကို စစ်အစိုးရတွေ သတ်နေပါတယ်ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံလေး နှစ်ပုံသုံးပုံလောက်ကို ထုတ်ပြပြီး နိူ်င်ငံခိုလှုံခွင့်တောင်းတယ်၊ ငါတို့နဲ့ စစ်အစိုးရက ဆန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုပြီး သူတို့နိူ်င်ငံရေးခိုလှုံခွင်ရဖို့ သူတောင်းစားလို တောင်းတယ်၊ အခုလည်း ဒီလိုပဲ ဒီဘာသာကို စောက်ကားမူများကို ငါတို့ကပဲ ကြားထဲကနေ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ၀က်ဆိုဘ်များပေါ်မှာ ကြော်ငြာရင် ကျုပ်ဘလော့ဂ်အား အေကန်အမှန် ဖျက်ဆီးပါမယ်... နင်ကတောင်းပန်မှန်းသိလို့ ရောက်တတ်တာမဟုတ်လားဆိုပြီး ဆိုကြအုံးမယ်..... ဆိုပါ ကြိုက်သလို အဓိပ္ပါယ်ယူလိုရပါတယ်. အဓိက ကတော့ ကျုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဖာသည်ပါးစပ်ကို ကောင်းကောင်းသိနေလို့ပါပဲ... ဒါကြောင့် တဘာသာနဲ့ တဘာသာ အပြန်အလှန် လေးစားကြပါ လို့ စာရေးသူပြောချင်ပါတယ်...